Tsy aleo misera tsara ? | NewsMada
Tsy aleo misera tsara ?
Par Taratra sur 19/04/2018
Fotrotry ny olana maro miseho amin’izao ny lafiny serasera. Noheverina fa zavatra mora fehezin’ny rehetra, ka tsy ilaina ianarana izy ity. Kinanjo rehefa zohina, tsy izay no mitranga. Tsy misy voafehy na ny serasera na ny teknolojian’ny serasera. Tokony ho fitaovana hanampy ny rindram-piarahamonina no lasa loza mitatao…
Raha ny “adin-tserasera” miseho ao anatin’ny tambajotra toa ny “Facebook” sy ny haino aman-jery isan-tsokajiny no fakafakaina, tena mizara roa tanteraka ny fomba fijery ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Ho an’ny eo amin’ny fitondrana sy ny mpomba azy, mandeha tsara izao fiainana izao. Ao anatin’ny fampandrosoana tanteraka, ka mitapi-maso ireo minia tsy mahita izany.
Ho an’ny andaniny mpanohitra kosa, efa tsy azo iainana intsony ny rivotra politika misy. Mizaka izay mianjady aminy fa tsy mba afaka mitsipatsipaka intsony ny vahoaka malagasy. Iza no no manana ny marina sy ny rariny? Arakaraka izay lafy misy ny tsirairay sisa. Izay voky sy mahazo tombony, tsy sahy hiteny mihitsy hoe ratsy tokoa izao zava-miseho izao. Ny ankoatra izay kosa, manara-dia ho azy izay manohitra ny zava-misy, satria mahatsapa fangirifiriana loatra.
Dia samy misintona izay zoro mety aminy. Dia samy manao fitaovana ny serasera sy ny teknolojian’ny serasera. Misy zava-dratsy anefa ao ambadik’izay, satria misy manao “sera naofa”, hoy ny fitenin-jatovo izay. Tsy mampiady ny samy Malagasy intsony, fa misy miezaka manapotika fiainain’olona mihitsy, amin’ny alalan’ny serasera.
Eny, misy ilay lalàna nahabe resaka… Saingy toa mihatra amin’izay manohintohina ny fitondrana ihany izany. Fa toa tsy misy mpiresaka ireto serasera miharo fandrahonana, mihatra amin’ireo mpanohitra te haneho hevitra? Ireto famporisihana ny samy Malagasy hifandramatra?
Aleo ny hevitra hivoaka… “Ampiadio ny hevitra, hilaminan’ny olona”, hoy Ralaindimby Tsilavina, izay. Tsaroana tokoa ilay olon’ny serasera, niezaka hatramin’ny farany nampita sy nizara ny mety sy ny tokony hatao amin’izany. Tsy natao hampiady olona, toa ny hampiasain’ny maro azy amin’izao fotoana ny serasera. Saingy tsy eo intsony moa izy hanoro izany…